Filtrer les éléments par date : lundi, 17 décembre 2018
lundi, 17 décembre 2018 21:12
Nanao faradoboka taty Antsiranana ny K25
lundi, 17 décembre 2018 20:54
Sambava: Rakitra ny savorovoro teny amin’ny Aéroport tamin’ny mpomba an'ny K13 sy K25
Tamin’ny efatra ora hariva dia efa tonga teny amin ny Aéroport ny mpanohana ny K25, izay nikasa handeha hitsena an'i Marc Ravalomanana, fa tetsy andaniny dia nanao meeting lehibe ny K13 ka raha vao tonga teny Ambodisatrana dia lasa nitsofotra tany amin'ny Aeroport, ka lasa iny no niteraka savorovoro tamin'ny andaniny sy ny ankilany.
Nananosarotra ny tsy fisian'ny mpitandro filaminana teny an-toerana ka voatery nampandre maika ny avy amin’ny Adema mba hisorohana ny fihoram-pefy.
Tamin’ny ora farany dia voatery nofoanana ny fahatongavan’ny K25 Marc Ravalomanana dia nalefa nody ny mpanohana azy mba tsy hisian'ny sakoroko.
lundi, 17 décembre 2018 20:52
Sambava: Notafihin'ny mpomba ny kandida Rajoelina tao amin'ny seranam-piaramanidina ny mpomba an-dRavalomanana
Voatery nofoanana tamin'ny ora farany ny fampielezan-kevitra tokony hataon'ny kandida Marc Ravalomanana teto Ambodisatrana ny tolakandro teo. Nitsofohan'ireo mpomba ny kandida ankilany izany ka nanao carnaval faradoboka tao amin'ny seranam-piaramanidina, raha mbola teo ampiandrasana ny fahatongavan'ny fiaramanidina mitondra ny Kandida Ravalomanana avy nanao faradoboka tao Antsiranana.
Nanapa-kevitra ny mpitarika ny K25 eto Sambava fa aleo foanana ny fihaonana amin'ny Kandida Ravalomanana hisorohana ny fifandonana sy fanimban-javatra.
lundi, 17 décembre 2018 20:37
Famoahana voka-pifidianana: Mbola hanao ny fanaony ve ny TVM ?
Andrasana ny fomba hamoahan'ny TVM ny voka-pifidianana amin'ny harivan'ny alarobia 19 desambra 2018, hanatanterahana ny latsabato ho an’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Nahagaga ny maro ihany mantsy ny tranga tamin'ny fihodinana voalohany. Maninona no tsy navoaka ny vokatra azo tamin'ireo birao fandatsaham-bato nanodidina an'Anosy misy ny foiben’ny haino amanjerim-panjakana, nefa nisy mpanao gazetin'ny TVM nalefa naka sary ny vokatra vonjimaika tany. Naninona no voka-pifidianana tany Antsiranana no naha maika ny namoaka azy ?
lundi, 17 décembre 2018 20:35
Hifarana tanteraka anio alatsinainy 17 desambra misasakalina ny fampielezan-kevitra fihodinana faharoa.
lundi, 17 décembre 2018 15:47
Sambava: Mpanao gazety niharan’ny daroka
Ny sabotsy 15 desambra 2018 tokony ho tamin’ny sivy ora alina no nisy nidaroka ity mpanao gazety avy amin’ny haino aman-jery tsy miankina Tropique FM ity, teny an-dalana nody avy nanolotra fampahalalam-baovao hariva, ary latsaka tany anaty hantsana. Soa fa nisy nahita izy ka namonjy azy haingana.
Nentina namonjy ny hopitaly Loteriana haingana tsy lavitra teo izy ary efa tonga teny ny avy amin’ny Polisim-pirenena io alina io ihany. Nitsoaka kosa ireo olon-dratsy.
Mbola tsy fantatra ny ambadik’izao fa lasan’ireo olon-dratsy ireo nitsoaka ihany koa ny « carte mémoire » ny fakan-tsariny.
lundi, 17 décembre 2018 15:42
Mampikony: Nomena "puce Telma" ireo Sefo Fokontany handefasana "sakafo"
Nanaitra taty Mampikony ny nizaran'ny mpampandany ny kandida Andry Rajoelina "puce Telma" vaovao ho an'ireo Sefo Fokontany, handefasana "sakafo" amin'ny androm-pifidianana. Kolikoly no andraisan'ny maro izany tranga izany.
lundi, 17 décembre 2018 12:16
Rajoelina Andry Nirina: une vraie marionnette
Le débat du 16 décembre, avec les différentes conditions posées par la Commission Electorale Indépendante (CENI) et l’Office de la Radio et Télévision Malagasy (ORTM), a démontré la véritable nature du candidat n° 13.
Parmi les conditions posées par les organisateurs figurent la non-utilisation de supports tels les tablettes et les téléphones dans le but d’éviter les messages « soufflés » au candidat par des « conseillers » extérieurs, sans oublier que les 2 candidats n’ont eu pas le droit d’emmener des lots de dossiers afin d’étayer leurs explications.
Le résultat a été catastrophique pour Rajoelina le n° 13. Il commença par s’embrouiller dans ses réponses et même si certains déclarent que Ravalomanana le n° 25 n’a pas le sens de la répartie, lors du débat, le n°13 n’en avait aucun.
lundi, 17 décembre 2018 09:45
Inona no nitranga tao amin'ny coulisse TVM tao?
Nahita ny rehetra fa tokony hanomboka tamin'ny 08ora alina ny fandaharahana hifanatrehan'ny Kandida roa omaly alahady.
lundi, 17 décembre 2018 09:43
Mila fampihavanana ny Firenena Malagasy
Rehefa tsy nirotsaka ho kandida ho Filoham-pirenena aho, dia nilaza fa foiko ho an'ny Firenena Malagasy ireo tetik'asa sy fahaiza-manao marobe naroso ho an'i Madagasikara.
Anisan'ireny, ary tarigetra noraisiko mihitsy ny hoe Vitatsika io, izany hoe isika rehetra no hifanome tanana ampandrosoana marina ny Malagasy sy ny Faritra iray manontolo.
Nilaza ihany koa aho fa tsy hanohana kandida rehefa tsy nilatsaka.
Ny sabotsy hariva, 15 desambra 2018, dia niantso ahy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Komity manohana an'i Marc Ravalomanana, nanazava tamiko izy fa ilain'ny Firenena ny fifanomezan-tanana amin'ireo tetik'asa maro naroso.
Notsindriany tamin'izany fa tena vonona hanao ny fampihavanam-pirenena ny Filoha Marc Ravalomanana.
Nanasa ahy izy amin'ny anaran'i Filoha Ravalomanana ny hanotronako azy amin'ny fandaharana mivantana hifanatrehan'ireo kandida 2 hiditra amin'ny fihodinana faharoa.